Sivavanye i-LG Optimus 3D (III) | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Emva kwe icandelo lokuqala y yesibini Kolu vavanyo lwe-LG, sishiya oku tercera uphononongo lwecandelo le ukusebenza ezinikezelwa sisiphelo sendlela. Sivavanye umdlalo kunye neQuadrant ukubona ukuba inamandla kangakanani i-Hardware.
Ukubandakanya Itekhnoloji ye-3dI-LG ifumana isiphelo sendlela ekumgangatho ophezulu ekuvumela ukuba uyiphathe epokothweni igajethi ukuya ekugqibeleni. Ukusebenza kwezinto ze izixhobo zekhompyutha ziyamangalisa. El iprosesa engundoqo uphendula kakuhle kakhulu kwaye GPU yenza iifowuni zingabinayo imifanekiso nangayiphi na indlela. Inkqubo ye- Iziphumo ze-HDMI yinto yakhe. Ikuvumela ukuba ukonwabele ukubanakho kokubekwa kweliso kwangaphandle kwaye akukho miqobo okanye isantya onokuthi ulindele. Ingayiyo enye i-RAM kulindeleke, kodwa ndiyayiqonda, ukuba Khange ndiyidinge.
Ukuba senza uvavanyo lokusebenza kunye Quadrant ihlala isinika iziphumo ngaphezulu kwama-2600Isondeza kakhulu kwi-Galaxy S2. Kuvavanyo lwegraphic soze ihambe ngaphantsi kwe-50FPS. Konke oku kubonisa ukuba izixhobo zekhompyutha zezona ziphezulu zinokufumaneka ngoku kwintengiso. Mhlawumbi inokuthelekiswa neGPS S2 kunye nokusebenza okuphezulu kuneHTC Sensation. Kuya kufuneka sivavanye i-HTC EVO 3D ukubona ukuba ixhomekeke kule LG.
Umthamo wemultimedia ngowona ugqibeleleyo unokulindela. Umculo kunye nerediyo ye-FM enomgangatho ophumeleleyo womculo. Umdlali webhanyabhanya yintoni ehambayo Iividiyo ze-1080p Ngaphandle kokuphazamisa, zombini ezirekhodiweyo kunye neemovie okanye uthotho othanda ukulonwabela.
Kulo Icandelo le-3D, ukonwaba kunye neeyure ezininzi zokuzonwabisa. Ukuba uqala nge Iividiyo zeYouTube ze3D, unokubona yonke into ukusuka ukufikelela ngokuthe ngqo kwesitishi kwijelo le-3D. Ukuba ukhetha i Iividiyo ze3D, iza nayo I-Asphalt 6 kwi-3D, i-NOVA 3D okanye i-Lets Golf 3D ifakiwe. Baye bacinga nangabo bakho abaqhelekileyo ngokwesiNtu. Iza ne Iidemo ze-UNO, iBrickBreaker okanye iTetris Ifunyenwe njengelifa ngokusesikweni kuVodafone
Njengomnxeba, ngokwasemzimbeni nangobuhle ayinakubethwa. Inelayini entle kakhulu kwaye igqityiwe kakhulu. Ndiyayithanda njengefowuni. Umgangatho womsindo kwiifowuni kunye nokugubungela, ungcono kunokhuphiswano ngokwenyani. Khange ndikwazi ukuvavanya isantya xa ndisebenzisa i-3G, nangona i-terminal isimahla, ibona kuphela idatha yeVodafone kwaye khange ndikwazi ukuyilungiselela ezinye iinkampani.
Amanqaku angathandekiyo, Kuye kwafuneka ndibenazo, the ibhetri. Namhlanje lo mbandela sele unzima kwii-smartphones zanamhlanje, kodwa kwesi sigxina ngaphandle kwesiqhelo. Kuhlala akukho nto. Kwaye andifuni kuthetha nantoni na kuni ekufuneka niyisebenzise njengefowuni imini yonke, ukubiza iyure enye ngosuku kunye nokukhangela kunye ne-imeyile ngeWiFi, ibhetri inxilile. Nditsho nokucinga ukuba ungomnye wabo basebenzisa iselfowuni yakho ukuzonwabisa kuloliwe ongaphantsi ... Enye into engeyiyo yile Inguqulelo ye-Android 2.2.2 Impazamo xa uhlaziya. Uninzi olunokubakho kwaye abanako ukulufumana ngeGingerbread. Lo mbandela wenza ukuba ulahlekelwe sisibheno esikhulu xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo kwi-HTC kunye ne-Samsung.
Ndingacebisa ukuba esi siginali kubahlobo bam? Ewe, kwabo banako ukuyifumana. Itekhnoloji ye-3D yeyona nto intsha inomdla yokulukuhla. Ayindikholisi kuba kunzima ukuyiqhela, iyadizzy, ayisiyiyo njengoko bayithengisa… Kodwa kulungile. I-Asphalt ngokwenene iyavuya. Ukuba, ukuba uyadlala, phila uqhotyoshelwe kwisokethi oya kuyidinga. Ndikudlulisela iividiyo zefowuni kunye nokusebenza kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » Sivavanye i-LG Optimus 3D (III)
Silela eyona nto ibalulekileyo, ibhetri, ukuba awukwazi ukulonwabela usuku olupheleleyo njengoko uThixo wayecebe. akuncedi nto kum.
UShawn 1080p sitsho
Emva kokubona ububhanxa uthe nje ... Ndixelele ukuba yeyiphi iselfowuni onokuchitha kuyo iiyure ezi-3 okanye ezi-4 ngokulandelelana udlala, ukhangela iincwadi, njl.
Kuyacaca ukuba kukusilela kuzo zonke iifowuni eziphathwayo okwangoku, ukuba zihlala zincinci, ewe, kodwa awunakulindela ukuba ukuba ngumnxeba we-3D ogcina ibhetri njengeselfowuni yakudala. Ke ndicinga ukuba akukho fowuni iphezulu iya kuba yeyokwakha kuwe kuba wonke umntu uya kukushiya ulahlekile.
Phendula uShawn 1080p
Inyaniso kukuba ibhetri ayihlali nakweyiphi na ifowuni ephezulu ngoku, kwaye kwindawo ephantsi kufuneka siye kwaNokia ukuba sifuna ukufumana into efanelekileyo okanye mhlawumbi iBlackberry. Kodwa inyani kukuba ifowuni ilungile, ikwanakho nokutshintsha ibhetri, kwaye ukuba ungumntu ofuna ukuchitha ixesha elininzi kude nekhaya, ungathenga indawo endaweni yomzekelo ukusukela ngo-1900. I-mA ukuya kwi-400 mA ngaphezulu koko kuyizisa ekhaya, kwaye nge-ebay kwaye yababona nge-10 yeendleko zibandakanyiwe. Yiza, ndikhetha ukuba nayo kwi-nokia ingca ephantsi ehlala ibhetri iveki, kodwa kukho wonke umntu nezinto zakhe.
Uhlaziyo kwi-Gingerbread yeyango-Okthobha ukusukela oko ukufudukela kwi-3D kuneziphumo zayo kunye nokulungelelaniswa kohlaziyo kuhamba kancinci ngalo mzuzu, bade bafumane ukuxhoma ...
Ewe ndiza kukunika imizekelo yokuba kutheni le fowuni ingcono kunokuba ibonakala, izinto ezilula njengokuqaqamba kwesikrini kuyamangalisa indlela entle ebonakala ngayo ngaphandle ngokungafaniyo nezikrini ze-samsung kwi-galaxi okanye kwi-iphone, ezingaboni nto, ndiyathemba bayayisombulula loo xD, okanye kuba inesitishi sememori esiphindwe kabini esenza ukuba idatha idlule njengamanzi ngokusebenzisa iprosesa.
Elinye lixabiso, okwangoku le fowuni ixabisa njenge-iPhone 4 esemva kakhulu kunakwimigaqo yokusebenza kunye nokusebenza, ngakumbi ngasemva….
Ingaphezulu kwe-lg yinkampani ebeka amaxabiso asezantsi kweempawu ezifanayo. Ungajonga iimodeli ezisezantsi ezisezantsi ukubona ukuba ndithini kuwe. Ngamafutshane, ikhukhamba leyo i-LG inyuke ngayo eluthuthwini, kwaye ngesimbo! Ndiyicebisa kuwo wonke umntu, ngaphandle kwakho abaneepokotho ezincinci.
Macias Ribas usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows sitsho
molo ndine-3d kwaye wonke umntu uthi unomsakazo we-fm kwaye andiyifumani ivela kwivodafone.
Phendula iMacas Ribas
Ayinayo unomathotholo!, Ibhetri ihlala ngaphezulu kosuku olu-1, i-3G ayisiyonto ilungileyo, umgangatho wesandi kwii-headphone, mm ayikho, enye i-SUPER, ndingayithenga kwakhona ngaphandle kwamathandabuzo